Nhau - GERISS Kaviri madziro akareba bhokisi dhirowa system, rega iwe nehunyanzvi hwepamusoro mukicheni!
Bhora Kutakura Dhirowa Slides
Wodzikisa Dhirowa Slides
Upfu bemhapemha nemasiraidhi
Khabineti Door Hinji
Zviratidzo Uye Vatengi
Workshop Yedu Kambani
GERISS Ruviri rusvingo tetepa bhokisi dhirowa system, rega iwe uine hunyanzvi hwepamusoro mukicheni!
Nekuvandudzwa kwenguva, vanhu vane dzakakwirira uye dzakakwirira zvinodiwa kumakicheni makabati. Iyo seti yekanaka kicheni kabati, Hardware yakakosha chikamu. GERISS HARDWARE inyanzvi yeChinese inogadzira kicheni kabati Hardware. Nhasi tichataura nezvekuti sei uchifanira kusarudza slim bhokisi dhirowa system.
GERISS M02 Series yakatsetseka dhirowa bhokisi system, iyo dhirowa padivi mapaneru ari 13mm ukobvu, ita dhirowa rako riine rakakura nzvimbo yekuchengetedza Dhirowa yemadziro mapaneru iwe unogona kugadzirisa ruvara zvichienderana neruvara rwaunoda. Yedu yakatetepa dhirowa system yeM02 Series, yakavanzika dhirowa masiraidhi iwe aunogona kusarudza akapfava padyo uye Push kuvhura maviri mabasa. Ichi chigadzirwa chinoshanda kwakawanda. Iwe unogona kushandisa inoderera dhirowa inotsvedza zvese pane yakatetepa dhirowa padivi mapaneru kana matanda dhirowa. Ichi chimiro chinogona kukuita iwe kudzikisa kumanikidza pane zvinyorwa.
Kune ezasi emakomo dhirowa masiraidhi, unogona kusarudza 2D mabhureki ekumberi kana 3D kumberi kukiya michina. Rumwe ruzivo iwe rwaunogona kushanyira webhusaiti yedu pahttps://www.yangli-sh.com/drawer-system/ kusarudza slim dhirowa system. Kana uine chero mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Tarisa pane kukura uye kugadzirwa kwemidziyo Hardware accessories
Runhare: 021-66350149 / 66368006
Kero Kambani: Chikamu 205, B chivakwa, 5589 Hutai Road, Baoshan District, Shanghai, China.
Fekitori Kero: Kwete. 10 Yonghe Road, Renhai Maindasitiri nzvimbo, Leliu Town, Foshan Guta, China.